ဒေါငျလိုကျသင်ျဘော (သို့) RP FLIP - Thutazone
ဒေါငျလိုကျသင်ျဘော (သို့) RP FLIP
ရေးသားသူ – ကိုကြျောစှာ
ဒီသင်ျဘောအမညျကိုတော့ RP FLIP ((FLoating Instrument Platform) လို့ချေါပွီး အမရေိကနျရကွေောငျးသုတသေန အဖှဲ့က ပိုငျဆိုငျတဲ့ သင်ျဘောဖွဈပါတယျ။ ရပေျေါမှာ အလြှားလိုကျ သှားနိုငျသလို သုတသေန ပွုလုပျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ၉၀ ဒီဂရီ ဒေါငျ့မတျပုံစံ သင်ျဘောကို ထောငျလိုကျပုံစံ ထားလို့ရပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျောလောကျက Drs. Fred Fisher နဲ့ Fred Spiess တို့က ဒီဇိုငျးထုတျပွီး Gunderson Brothers Engineering က တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီသင်ျဘောကိုတော့ ပငျလယျပွငျသုတသေန အတှကျ အသုံးပွုတာပါ။ ပငျလယျရစေီးကွောငျးတှေ ဘယျလို စီးဆငျးတယျ၊ ဘယျလိုမြိုး ကွီးမားတဲ့ လှိုငျးကွီးတှေ ဖွဈပျေါလာရတယျ၊ လှိုငျးတှေ ဘယျလိုရှလြေှ့ားတယျ၊ လထေုနဲ့ ပငျလယျကွားမှာ အပူတှေ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ ဖလှယျနကွေတယျ၊ ပငျလယျရအေောကျက သတ်တဝါတှဟော ဘယျလိုမြိုး အသံလှိုငျးတှကေို ထုတျလှတျကွတယျ စတဲ့ စမျးသပျမှု့မြားစှာကို ဒီသင်ျဘောကို အသုံးပွုပွီး လလေ့ာနိုငျခဲ့ကွပါတယျ။
ဒေါငျလိုကျပုံစံအတှကျ အထူးဒီဇိုငျးထုတျရတာကတော့ ပငျလယျပွငျမှာ ပိုမို တညျငွိမျတဲ့ အခွအေနလေိုခငျြတဲ့အတှကျပါ။ အလြှားလိုကျပုံစံထကျ၊ ဒေါငျလိုကျပုံစံဟာ ပိုမိုတညျငွိမျစပွေီး လှိုငျးကွောငျ့ သင်ျဘော လူးခွငျးကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။ သင်ျဘောရဲ့အရှယျအစားကတော့ အလြား ၃၅၅ပေ အနံ ၂၆ပေ နဲ့ အလေးခြိနျကတော့ တနျ ၇၀၀ ဖွဈပါတယျ။
ဒီသင်ျဘောမှာ ပါဝါအနနေဲ့ ၁၅၀ကီလိုဝပျ ဒီဇယျဂငျြနရတော ၂လုံး နဲ့ ၄၀ကီလိုဝပျ Aux ဂငျြနရတော တဈလုံးကို တပျဆငျထားပွီး တဈနာရီကို ၁၂မိုငျ အမွနျနှုနျးနဲ့ မောငျးနှငျနိုငျပါတယျ။ သင်ျဘောပျေါမှာတော့ သင်ျဘောအမှုထမျး ၅ဦး နဲ့ သုတသေနသမား ၁၁ ဦး လိုကျပါစီးနငျးနိုငျပါတယျ။ ဒီသင်ျဘောကို ၁၉၆၂ ခုနှဈ ဇူလိုငျလကတညျးက ရခေခြဲ့တာဖွဈပွီး ကုနျကစြရိတျအနနေဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာ၆သိနျးခနျ့ ကုနျကခြဲ့ပါတယျ။
ဒီသင်ျဘောဟာ အလြှားလိုကျအနအေထားကနေ ဒေါငျလိုကျအနအေထားကို ရောကျရှိဖို့ ကတော့ သင်ျဘောရဲ့ အရှပေို့ငျးကို လဖွေညျ့သှငျးပွီး သင်ျဘောရဲ့အနောကျပိုငျးက အခနျးတှကေိုတော့ ရဖွေညျ့သှငျးခွငျးဖွငျ့ ဒေါငျလိုကျပုံစံ ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ဒေါငျလိုကျအခြိနျမှာတော့ သင်ျဘောရဲ့ ပေ ၃၀၀ လောကျဟာ ရအေောကျကို ရောကျရှိသှားပါတယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ သင်ျဘောရဲ့ အရှပေို့ငျး ၅ ထပျ(၅၅ပေ) ကတော့ ရပေျေါမှာ ဒေါငျလိုကျပျေါနပွေီးတော့ သုတသေန ပွုလုပျရနျ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပေါပွီ။ ဒီလိုမြိုး အလြှားလိုကျကနေ ဒေါငျလိုကျအခွအေနကေို ရောကျရှိဖို့ ပမျြးမြှ ၂၈ မိနဈလောကျအခြိနျယူရပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ သင်ျဘောပျေါမှာ ရှိတဲ့လူတှဟောလညျး သင်ျဘောကုနျးပတျပျေါမှာ ထှကျနရေပါတယျ။
ဒီလို သင်ျဘောတှမှော တပျဆငျထားတဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှကေလညျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။ သင်ျဘောဟာ အလြှားလိုကျရှလြေှ့ားနတေဲ့အခြိနျမှာလညျး အသုံးအဆောငျတှေ သုံးစှဲနိုငျသလို ဒေါငျလိုကျအခွအေနမှောလညျး အသုံးပွုနိုငျဖို့ အထူးဒီဇိုငျးထုတျထားပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အလြှားလိုကျအခွအေနမှော သငျနငျးနတေဲ့ ကွမျးပွငျဟာ ဒေါငျလိုကျအခွအေနမှော နံရံဖွဈသှားပွီးတော့၊ နံရံဟာ ကွမျးပွငျအဖွဈကို ပွောငျးလဲသှားမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ပါ။
ဒီအတှကျ ကုတငျတှေ၊ ဘစေငျတှေ၊ အိမျသာတှေ အားလုံးဟာ Dimension နှဈမြိုးစလုံးနဲ့ အသုံးပွုနိုငျအောငျ ဒီဇိုငျးလုပျထားပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ဒီသင်ျဘောကို ကယျလီဖိုးနီးယားအခွစေိုကျ Scripps ပငျလယျ နှငျ့ ရကွေောငျးဆိုငျရာ လလေ့ာရေးအဖှဲ့က အသုံးပွုလြှကျရှိပါတယျ။ အောကျမှာတော့ ဒီသင်ျဘော သုသသေန ပွုလုပျမယျ့ အခြိနျမှာ သင်ျဘောကို ထောငျနတေဲ့ video လေးကို ကွညျ့ရှု့နိုငျပါတယျ။
ဒေါင်လိုက်သင်္ဘော (သို့) RP FLIP
ရေးသားသူ – ကိုကျော်စွာ
ဒီသင်္ဘောအမည်ကိုတော့ RP FLIP ((FLoating Instrument Platform) လို့ခေါ်ပြီး အမေရိကန်ရေကြောင်းသုတေသန အဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။ ရေပေါ်မှာ အလျှားလိုက် သွားနိုင်သလို သုတေသန ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ၉၀ ဒီဂရီ ဒေါင့်မတ်ပုံစံ သင်္ဘောကို ထောင်လိုက်ပုံစံ ထားလို့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက်က Drs. Fred Fisher နဲ့ Fred Spiess တို့က ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး Gunderson Brothers Engineering က တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်္ဘောကိုတော့ ပင်လယ်ပြင်သုတေသန အတွက် အသုံးပြုတာပါ။ ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းတွေ ဘယ်လို စီးဆင်းတယ်၊ ဘယ်လိုမျိုး ကြီးမားတဲ့ လှိုင်းကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်၊ လှိုင်းတွေ ဘယ်လိုရွှေ့လျှားတယ်၊ လေထုနဲ့ ပင်လယ်ကြားမှာ အပူတွေ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဖလှယ်နေကြတယ်၊ ပင်လယ်ရေအောက်က သတ္တ၀ါတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုး အသံလှိုင်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ကြတယ် စတဲ့ စမ်းသပ်မှု့များစွာကို ဒီသင်္ဘောကို အသုံးပြုပြီး လေ့လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါင်လိုက်ပုံစံအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ရတာကတော့ ပင်လယ်ပြင်မှာ ပိုမို တည်ငြိမ်တဲ့ အခြေအနေလိုချင်တဲ့အတွက်ပါ။ အလျှားလိုက်ပုံစံထက်၊ ဒေါင်လိုက်ပုံစံဟာ ပိုမိုတည်ငြိမ်စေပြီး လှိုင်းကြောင့် သင်္ဘော လူးခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ သင်္ဘောရဲ့အရွယ်အစားကတော့ အလျား ၃၅၅ပေ အနံ ၂၆ပေ နဲ့ အလေးချိန်ကတော့ တန် ၇၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်္ဘောမှာ ပါဝါအနေနဲ့ ၁၅၀ကီလိုဝပ် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ၂လုံး နဲ့ ၄၀ကီလိုဝပ် Aux ဂျင်နရေတာ တစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားပြီး တစ်နာရီကို ၁၂မိုင် အမြန်နှုန်းနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာတော့ သင်္ဘောအမှုထမ်း ၅ဦး နဲ့ သုတေသနသမား ၁၁ ဦး လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီသင်္ဘောကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကတည်းက ရေချခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၆သိန်းခန့် ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
ဒီသင်္ဘောဟာ အလျှားလိုက်အနေအထားကနေ ဒေါင်လိုက်အနေအထားကို ရောက်ရှိဖို့ ကတော့ သင်္ဘောရဲ့ အရှေ့ပိုင်းကို လေဖြည့်သွင်းပြီး သင်္ဘောရဲ့အနောက်ပိုင်းက အခန်းတွေကိုတော့ ရေဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဒေါင်လိုက်ပုံစံ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒေါင်လိုက်အချိန်မှာတော့ သင်္ဘောရဲ့ ပေ ၃၀၀ လောက်ဟာ ရေအောက်ကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သင်္ဘောရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ၅ ထပ်(၅၅ပေ) ကတော့ ရေပေါ်မှာ ဒေါင်လိုက်ပေါ်နေပြီးတော့ သုတေသန ပြုလုပ်ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလိုမျိုး အလျှားလိုက်ကနေ ဒေါင်လိုက်အခြေအနေကို ရောက်ရှိဖို့ ပျမ်းမျှ ၂၈ မိနစ်လောက်အချိန်ယူရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သင်္ဘောပေါ်မှာ ရှိတဲ့လူတွေဟာလည်း သင်္ဘောကုန်းပတ်ပေါ်မှာ ထွက်နေရပါတယ်။
ဒီလို သင်္ဘောတွေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ သင်္ဘောဟာ အလျှားလိုက်ရွှေ့လျှားနေတဲ့အချိန်မှာလည်း အသုံးအဆောင်တွေ သုံးစွဲနိုင်သလို ဒေါင်လိုက်အခြေအနေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလျှားလိုက်အခြေအနေမှာ သင်နင်းနေတဲ့ ကြမ်းပြင်ဟာ ဒေါင်လိုက်အခြေအနေမှာ နံရံဖြစ်သွားပြီးတော့၊ နံရံဟာ ကြမ်းပြင်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဒီအတွက် ကုတင်တွေ၊ ဘေစင်တွေ၊ အိမ်သာတွေ အားလုံးဟာ Dimension နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဒီသင်္ဘောကို ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Scripps ပင်လယ် နှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ လေ့လာရေးအဖွဲ့က အသုံးပြုလျှက်ရှိပါတယ်။ အောက်မှာတော့ ဒီသင်္ဘော သုသေသန ပြုလုပ်မယ့် အချိန်မှာ သင်္ဘောကို ထောင်နေတဲ့ video လေးကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
မွနျမာ့ရုပျရှငျသမိုငျးထဲမှ ရဲဝံ့စှနျ့စား စတနျ့မငျးသား ခဈြရှကွေီး